Fampihavanana ny Malagasy amin’ny taniny : Kara-tany miisa 1 000 no hozaraina ao Tsiroanomandidy -
AccueilRaharaham-pirenenaFampihavanana ny Malagasy amin’ny taniny : Kara-tany miisa 1 000 no hozaraina ao Tsiroanomandidy
25/08/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny fampihavanana ny Malagasy amin’ny taniny no tanjona hapetraka amin’ny fizarana kara-tany ho an’ny tantsaha nanajary izany, araka ny baikon’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Io no fanamarihana noentin’ny minisitra misahana ny tetikasan’ny Filohan’ny repoblika sy ny fanajariana ny tany Narson Rafidimanana, mikasika ny ezaka ataony amin’ny fanomezana “titre” sy kara-tany ho an’ny Malagasy. Ny alatsinainy izao dia kara-tany miisa 1 000 no hozaraina amin’ny kaomina 7 ao anatin’ny distrikan’i Tsiroanomandidy Faritra Bongolava. Talohan’izao, izany hoe tamin’ny 27 mey 2017 dia titra miisa 348 no nozaraina tamin’ny mponina tao Ankadinondry Sakay. Tafiditra tao anatin’ny tanin’ny vahiny ireo ka naverina tamin’ny Malagasy izay nikarakara sy nanajary azy. “ Efa isan’ny hevitry ny fampihavanana ny Malagasy amin’ny taniny ny famerenana ny taniny izay lasan’ny Colon taloha. Noraisin’ny fanjakana ho adidy mihitsy ny fanampiana an’ireo tantsaha hahazo kara-tany”, raha ny fanazavana.
Ho an’i Tsiroanomandidy manokana, dia efa mipetraka ny tetikasa hametraka ny “nouvelle ville” na ny toerana natokana ho fihitaran’ny tanàna. “ Tsara marihina fa noho ny fangatahana voaray teto anivon’ny minisitera iadidiako, mikasika ny tokony hampidinana ny saran’ny fanaovana “borne” sy “ Ranch” dia ambara avy hatrany fa ferana ho 150 000 Ariary ny sarany hiantsorohan’ny mpisitraka izany, ka ny minisitera kosa ho hiantsoroka ny ambiny. Tsiahivina fa 240 000 Ariary ny saran’izany hatramin’izay”, raha ny fanazavana hatrany.
Milamin-tsaina ny isan-tokantrano rehefa vita soa aman-tsara ny fikarakarana ara-taratasy ny taniny. Tafiditra ao anatin’ny fampihavanana ny Malagasy amin’ny taniny avokoa izany.
Ny volana oktobra 2017 ho avy izao koa dia mbola hisy kara-tany miisa 1 000 hozaraina ho an’ny kaomina Ankadinondry Sakay ary miiisa 100 ho an’ny kaomina Mahasolo. Ny volana novambra any kosa kara-tany miisa 1 000 no hozaraina ao amin’ny kaomina Firavahana sy Mangatany. Ny 15 desambra 2017 kosa no hizarana ny “titre” rehetra tafiditra tao anatin’ny “Ranch” ao amin’ny kaomina Ambatolampy. “Izany rehetra izany no natao dia hampirisihana ny tantsaha hamokatra bebe kokoa ho fisandratana mirindra ho an’ny rehetra. Vonona hatrany ny tenako sy ny minisitera tantaniko hifanome tanana amin’ny rehetra ho fanandratana ity firenena malalatsika ity”, raha ny fanazavan’ny minisitra Narson Rafidimanana.